YEYINTNGE(CANADA): Monday, November 14
14 Nov 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/14/20110အကြံပြုခြင်း
မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်း ဖိလစ်ပိုင်ကို ၅-၀ ဂိုးဖြင့်နိုင်
Published on November 14, 2011 by ဒီဗွီဘီ
၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်းဟာ စတုတ္ထမြောက် ပွဲစဉ်အဖြစ် မနေ့ ညနေပိုင်းက ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ ၅-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
​​ပွဲ​အ​ပြီး​​ ​မြန်​မာ​အ​သင်း​သား​များ​​ ​အောင်​ပွဲ​ခံ​နေ​စဉ်
ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့​ ​မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ၎ ပွဲ​ ကစားပြီးချိန်မှာ ၃ ပွဲနိုင်၊ ၁ ပွဲ သရေ၊ ၁၀ မှတ်ရရှိကာ ပွဲစဉ်မကုန်ခင် ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ရောက်ခွင့် ရသွား​​ပြီ​ ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပွဲစဉ်မှာ လာအိုအသင်းက တီမောအသင်းကို ၃-၀ ဂိုးနဲ့​အနိုင်ကစားသွားလို့​ ​မြန်မာအသင်းအတွက် အခြေအနေ​ ​ကောင်းသွားတာပါ။
တီမောအသင်းဟာ ၆ မှတ်​ပဲ​ ရရှိသေးလို့​​ ​နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ မြန်မာအသင်းကို အနိုင်ရရင်လည်း ရမှတ်အနေအထားရ ဆီမီးဖိုင်နယ်​ တက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
မြန်မာအသင်းမှာ ဂိုးသမား​ သီဟစည်သူ ဆက်လက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး​ ခံစစ်ပိုင်းမှာတော့ ဉာဏလွင်၊ ဇော်မင်းထွန်း၊ မိုးဝင်း၊ ရန်အောင်ဝင်းတို့ ကစာခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာအသင်းနည်းပြ ဟန်ဆန်က ကွင်းလယ်မှာ​ ​ကျော်ဇေယျာဝင်းနဲ့​ ​အေးဆန်းအတွဲကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး​ ​တောင်ပံကစားသမားတွေအဖြစ်​ ​ပြည်ဖြိုးဦးနဲ့​ ​အောင်မြင့်အေးတို့​​ ​ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ အရင်ပွဲစဉ်တွေက​ အတိုင်း မင်းမင်းသူနဲ့​ ​ကျော်ကိုကိုတို့​​ ပွဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်အသင်းမှာလည်း မူလာ၊ ဒီဂျောင်၊ မန်နီအော့ စတဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေ လူစုံပါဝင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင်အသင်းဟာ ဒီနေ့ ပွဲမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းမျိုး မရခဲ့ဘဲ ​နောက်တန်းကလည်း အမှားများခဲ့လို့ မြန်မာအသင်းကို​ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်သွားတာပါ။
မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ပထမပိုင်းပွဲအစမှာ ဖိလစ်ပိုင်အသင်းဘက်ကို ဖိကစားခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၁၁ မိနစ်မှာ အဖွင့်ဂိုးအဖြစ် ကျော်ဇေယျာဝင်း ကန်တင်တဲ့ ထောင့်ကန်ဘောကို ဖိလစ်ပိုင်​ဂိုးသမား မူလာ ကာကွယ်ရာမှာ မမိဘဲ လက်က လွတ်ကျခဲ့တာကြောင့်​ ​အေးဆန်းက အနီးကပ် သွင်းယူသွားတာပါ။
ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်အသင်းက ကစားကွက် အချိတ်အဆက်​ ​ပြန်မိလာပြီး မြန်မာအသင်းဘက်ကို ပြန်လည် ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးကန်သွင်းခွင့်အချို့ ဖိလစ်ပိုင်အသင်း ရရှိခဲ့ပေမယ့် ရှေ့တန်းကစားသမားတွေ အဆုံးသတ်ပိုင်း အားနည်းခဲ့လို့ ချေပဂိုး ပြန်မရခဲ့တာပါ။
မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ပွဲချိန် ၃၈ မိနစ်မှာ နောက်တန်း ဘယ်အစွန်လူ ဉာဏလွင်အစား ရွှေလှိုင်ဝင်းကို ထည့်သွင်းပြီး ခံစစ်ပိုင်း အားဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲချိန် ၄၀ မိနစ်မှာတော့ တန်ပြန်တိုက်စစ်​ ကနေ မြန်မာအသင်းအတွက် ဒုတတိယဂိုးကို​ ​ကျော်ဇေယျာဝင်းက သွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ​ ​မြန်မာအသင်း နောက်ခံလူ မိုးဝင်း ဒဏ်ရာရသွားလို့ ဆက်မကစားနိုင်တော့ဘဲ ဒုတိယပိုင်း ပြန်အစမှာ ဇော်ဇော်ဦး ၀င်ရောက် ကစားပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ပြန်စပြီး ၂ မိနစ်အကြာမှာ ဖိလစ်ပိုင်အသင်း နောက်ခံလူ နှစ်ယောက်ကြားကနေ ကျော်ကိုကို ထိုးဖောက်ဆွဲယူသွားပြီး အပိုင်ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ မြန်မာအသင်း တတိယဂိုး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်အသင်းကတော့ တတိယဂိုး ပေးလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကစားအား သိသိသာသာ ကျသွားပြီး မြန်မာအသင်းရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို ရောက်ရှိ သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျော်​ကို​ကို​ ​ဖိ​လစ်​ပိုင်​အ​သင်း​ဘက်​ ​ဂိုး​သွင်း​ယူ​နေ​စဉ်
ပွဲချိန် ၅၄ မိနစ်မှာ ကျော်ကိုကိုကပဲ ဖိလစ်ပိုင်နောက်ခံလူ ၂ ယောက်ကို​ ​ကျော်ဖြတ်ကာ​ ​မြန်မာအသင်းအတွက်​ ​လေးဂိုးမြောက်ကို သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် ၇၈ မိနစ်မှာ ကျော်ကိုကို ကို အနားပေးပြီး မင်းမင်းထွန်းနဲ့ လူစားလဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် ၇၈ မိနစ် အရောက်မှာ ဖိလစ်ပိုင်​ ​အသင်းခေါင်းဆောင် မန်နူရယ်အော့ ၂ ၀ါ၊ ၁ နီနဲ့ အထုတ်ခံရပါတယ်။
မြန်မာအသင်းအတွက် ပဉ္စမမြောက်ဂိုးကို​ မိနစ် ၉၀ မှာ မင်းမင်းသူရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ ရန်အောင်ဝင်းက သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ တီမောအသင်းနဲ့ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပစိဖိတ် စစ်နယ်ဝှမ်း သစ် (အပိုင်း၁-၂)
by FNG on November 12, 2011
DK၊ ၊ကြီးထွားလာနေသောတရုတ်နိုင်ငံအား တန်ပြန်ထိန်းညှိနိုင်ရန် ပဏာမလုပ်ငန်းများ
ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်မဟာမိတ်များမှ စတင်လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်သည်။
ယခုလအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ဟီလာရီကလင်တန် (Hillary Clinton) နှင့်
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လီယွန်ပဲန်နက်တာ (Leon Panetta) တို့မှ သြစတြေးလျမှ ရောက်ရှိ
လာသော သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့အား တွေ့ဆုံရန်
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ (San Francisco) သို့သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရှိ ယခင်ခံတပ်ဟောင်းတခုဖြစ်ခဲ့သည့် ပရဲဆီးဒီးယိုး (Presidio) ပန်းခြံ၌
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် (၁၉၅၁) ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုခဲ့သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊
သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံများပါဝင်သည့် (ANZUS) စစ်စာချုပ်အဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်
အခမ်းအနားပင်ဖြစ်၏။ ထိုစစ်စာချုပ်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများ၏
တပ်များနှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်တပ်များ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၌ အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဝင်နေ
ကြစဉ်အချိန်အတွင်း၊ စစ်အေးတိုက်ပွဲ (Cold War) စတင်ခါနီးဆဲဆဲတွင်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်
သည်။ ယခုအပတ်၌ လုပ်ဆောင်ချက်တရပ်မှာ အာရှ-ပစိဖိတ်နိုင်ငံများအား ခြိမ်းခြောက်
လာပြီဖြစ်သော နွားနှင့်သဏ္ဍာန်တူ၍ တဘို့တည်းသာကြည့်သည့် အကျင့်ပျက် တရုတ်
ကွန်မြူနစ် ၏ရန်အား ကာကွယ်ရန်အတွက် (ANZUS) စစ်စာချုပ်အား လက်ရှိလိုအပ်
အနောက်တောင်ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း၌ တပ်ဖြန့်ချမှုသစ်တရပ်အား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်သြစတြေးလျတို့မှ စတင်နေခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်=
အရှေ့အာရှဒေသ (East Asia) တွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များဖြန့်ကျက်ထားမှုမှာ ပြီးဆုံး
ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ရှိပြီဖြစ်သော ကိုရီးယားစစ်ပွဲမှ ကြီးစွာသက်ရောက်မှု
ရှိနေခဲ့သောကြောင့်ဟု ထင်မှတ်ရသည်။ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ထပ်မံစစ်ဖြစ်ပွားနိုင်
သည့် အလားအလာကြောင့် အမေရိကန်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များ၊ ရေတပ်နှင့် လေတပ်ဖွဲ့များ
မှာ အနောက်တောင်ပစိဖိတ်ဒေသ (Northwest Pacific) ရှိ ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီး
ယားနိုင်ငံများတွင် အဓိကစုစည်းဖြန့်ချထားခဲ့သည်။ (၁၉၅၀) မှစပြီး ကွန်မြူနစ်မြောက်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏အစဉ်ရန်လိုနေမှုမှ အနောက်တောင် ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း အမေရိ
ကန်တပ်များထားရှိရန် လိုအပ်ချက်အား ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်တပ်များ
ရာသက်ပန်တပ်စွဲထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေစိုက်အဆောက်အဦးများအား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံများမှ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်
ရေတပ်နှင့်လေတပ်စွမ်းရည်များအား တိုးတက်လာခဲ့ပြီးနောက် တောင်တရုတ်ပင်လယ်
တခုလုံးအား သမိုင်းကြောင်းအရ ၄င်းမှတဦးတည်းပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြွေးကြော်လာသည့်
တရုတ်ပြည်၏ အန္တရာယ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အရေးအပါဆုံးသော
ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား လက်ရှိနေရာမှ တောင်ဘက်မိုင်ပေါင်း (၂၀၀၀)
ခန့်အကွာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်စေ့ဆော်လာခဲ့၏။ အမေရိကန်နှင့်သြစတြေးလျဝန်ကြီးများ၏
ဆန်ဖရန်စစ္စကို၌တွေ့ဆုံမှုတွင် ယခုကိစ္စသည် အခရာဖြစ်နိုင်ပါ၏။ နှစ်နိုင်ငံအကြား
ဆိုက်ဘာကာကွယ်ရေး (Cyberdefense) အတွက် ကတိကဝတ်များထားရှိမှုအပြင်
လုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်။) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနှင့် သြစတြေးလျ၏
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးဧရိယာများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အမေရိကန်စစ်ပစ္စည်းများအား
ကြိုတင်နေရာချထားနိုင်ခြင်းတို့ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အဆောက်အဦး
များနှင့် ဆိပ်ကမ်းများကိုအသုံးပြုခွင့်နှင့် ဒေသတွင်း စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြု
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း၌ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ သံတမန်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများအား
အရှိန်မြှင့်လာချိန်တွင် အမေရိကန်နှင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံတို့အကြား စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်မှုအား အလားတူတိုးမြှင့်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (၂၀၀၅) ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်
စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့အကြား စစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် “မဟာဗျူဟာမြောက်
အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှု” (Strategic Framework Agreement) အား
စတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊ ယခုနှစ် (၂၀၁၁) တွင် အမေရိကန်ရေတပ်၏ ကမ်းတက်တိုက်
ခိုက်ရေး ရေယာဉ်များအား တပ်စွဲခွင့်ပြုရန်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထပ်မံသက်တမ်းတိုး
ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပို၍နက်ရှိုင်းလာသော အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကြောင့် နှစ်စဉ်နိုင်ငံအများ
အပြားမှပါဝင်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဦးဆောင်သည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တဝိုက်
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများအား ထောက်ပံ့ရန် အမေရိကန်ရေတပ်၏ စစ်ရေးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအား
အပါအဝင် သြစတြေးလျနှင့်စင်္ကာပူနိုင်ငံများနှင့် ထားရှိသည့်သဘောတူညီမှုများတွင်
အဆိုပါနိုင်ငံများတွင် အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များအား အမြဲတမ်းအခြေစိုက်တပ်စွဲထား
ရန်အား တောင်းဆိုထားခြင်းမရှိပဲ ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားတို့နှင့်ထားရှိသည့် သဘောတူညီ
ချက်များနှင့် ခြားနားမှုရှိ၏။ ဒေသတွင်း၌ အမေရိကန်တပ်များ၏မားမားမတ်မတ်ရှိနေမှုအား
ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့၏။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်တပ်များတည်ရှိမှုအား ဒေသခံဂျပန်ပြည်
သူများမှ ဆန့်ကျင်လာနေသော အိုကီနာဝါကျွန်း (Okinawa) တွင်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံများအတွင်းရှိလေ့ကျင့်ရေးနယ်မြေများအား ကန့်သတ်မှုများ ချမှတ်
ခဲ့ခြင်းသည်လည်း အမေရိကန်တပ်များ၏တိုက်ပွဲဝင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှုနှင့် ၄င်းတို့ရှိခြင်း
၏အသုံးတည့်မှုအား လျော့ကျစေခဲ့သည်။ အမေရိကန်စီမံချက်ရေးဆွဲသူများမှ ချမှတ်
ထားသောစီမံချက်ပုံစံအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနှင့် သြစတြေးလျ၊ စင်္ကာပူနှင့်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တဝိုက်ရှိ နိုင်ငံများမှပူးပေါင်းပါဝင်သော ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ
အားမကြာခဏလုပ်ဆောင်ရန်၊ ထိုနိုင်ငံများပိုင်အဆောက်အဦးများအား ယာယီအသုံးပြုခွင့်ရရှိ
ရန်နှင့် အမေရိကန်စစ်ဦးစီးအရာရှိများ၊ စစ်ဘက်အကြံပေးအရာရှိများမှ မကြာခဏတိုင်
ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိနေကြဟန်ရှိသည်။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ (သို့)
ဘေးအန္တရာယ်များကို အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အမေရိကန်လေတပ်နှင့်မြေပြင်တပ်
ဖွဲ့များမှ လေကြောင်းမှ ဦးစွာဝင်ရောက်လာပြီးနောက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေချထားပြီးဖြစ်သည့်
ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ သိပ်မကြာမီတွင်လည်း အမေရိ
ကန်ရေတပ်မှ ထပ်မံအားဖြည့်လာမည် ဖြစ်သည်။
ထိုနည်းလမ်းအရ ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီယားတွင်အခြေစိုက်ထားသော အမေရိကန်တပ်များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေးအရ ပြဿနာဖြစ်လာမှုအား ရှောင်လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အမေရိ
ကန်တပ်များကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ရေးအဆောက်အအုံများရှိရာ အမေရိ
ကန်မြေပေါ်ရှိမိခင်တပ်များတွင်နေထိုင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ကာ စစ်သည်များနှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစု
ဝင်များအတွက်လည်း သူတို့၏မိသားစုဘဝများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အစီအစဉ်များ
ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။ အနောက်တောင်ပစိဖိတ်ဒေသတွင် လုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်
ရန်နည်းလမ်းမှာ သဘောတရားပိုင်း အများစုပေါ်တွင်အခြေခံနေပြီး ဒေသတွင်းဝင်ရောက်နိုင်
သည့် လမ်းကြောင်းများအား တရုတ်တပ်များမှ ခြိမ်းခြောက်လာလျှင်မူ ဖိအားများစွာတိုးလာ
မည်ဖြစ်သည်။ ဤစီမံချက်သာ အောင်မြင်နိုင်မည် ဆိုပါလျှင်လည်း တရုတ်ဒုံးကျည်များ၏
ခြိမ်းခြောက်မှုတိုးတက်မြင့်မားလာနေ၍ စစ်ကူရယူရန် အိုကီနာဝါနှင့် တောင်ကိုရီးယားတွင်
ရှိသော စစ်စခန်းများအား အမေရိကန်အနေနှင့် အသုံးချနိုင်မည် ဟုတ်မဟုတ်အား မေးခွန်း
ထုတ်ရန်ဖြစ်လာနိုင်၏။ အမေရိကန်စစ်မဟာဗျူဟာ ပညာရှင်များနှင့်သံတမန်များအတွက်
လှည့်ကွက်တခုမှာ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည့် ယခုစီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖေါ်နေ
ချိန်အတွင်း၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကတိကဝတ်မှာ အခိုင်
အမာဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်းမိတ်ဖက်နိုင်ငံများအား အဆက်မပြတ်နားသွင်းနေရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဖိအားများ မြင့်တက်လာသည်နှင့် ထိုလှည့်ကွက်အား ပြန်ဖြည်ရန်မှာမူ လွယ်ကူလှ
DK (Ref: New Pacific Theater)
= ပစိဖိတ် စစ်နယ်ဝှမ်း သစ် (အပိုင်း-၂)
by FNG on November 14, 2011
DK၊ ၊အာရှတိုက်တွင် လမ်းဘေးလူမိုက် ဖြစ်လာသော တရုတ်အား တန်ပြန်ထိန်းညှိရန်
အတွက်သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဒါဝင်မြို့ (Darwin) ရှိ စစ်အခြေစိုက်စခန်း တခုတွင် အမေရိကန် မရိန်း
တပ်များမှ အမြဲတမ်းအခြေစိုက်ရန်အတွက် အလှည့်ကျတပ်စွဲ တော့မည့် ကိစ္စအား အိုဘား
မားမှ သိပ်မကြာမီ၌ ကြေငြာတော့မည် ဖြစ်၏။
အိုဘားမားမှ အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်နှင့် လာမည့် (၂၀၁၁) နိုဝင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့တွင်
သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ထိုစစ်ရေးကိစ္စအား
သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဂီးလဒ်နှင့် ပူးတွဲ၍ ကြေငြာရန် စီစဉ်ထားသည်။ စုစုပေါင်း
(၂၆) နာရီခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော ထိုခရီးစဉ်ဖြင့် ANZUS စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ တည်ထောင်
မှု နှစ် (၆၀) ပြည့်ခဲ့ခြင်းအား ဂုဏ်ပြုကြခြင်းလည်း မည်၏။ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုကီနာဝါကျွန်းနှင့် ပါပူ
အာနယူးဂီနီ (Papua New Guinea) ကျွန်းနိုင်ငံလေး၏ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ (၂၀၀၀)
ခန့်အကွာရှိ အမေရိကန်ပိုင် ဂူအမ်ကျွန်း (Guam) တို့တွင် တပ်စွဲထားသော အမေရိကန်မရိန်း
တပ်အင်အားမှာ ထုထည်ကြီးမားလှပြီး အမေရိကန်မရိန်းတပ်မကြီး (US Marine Corps)
တခုလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ပစိဖိတ်ဒေသတွင် အခြေစိုက်၏။
ယခု အမေရိကန်တပ်များ သြစတြေးလျတွင် အခြေစိုက်လာခြင်းသည် စစ်ရေးအရခေတ်မှီ
လာသောစစ်တပ် ကို ပိုင်ဆိုင်လာနေသော ကွန်မြူနစ်တရုတ်နှင့် အဓိကပတ်သက်နေပြီး
ဂျပန်နှင့် ဂူအမ်ရှိ အမေရိကန်တပ်များအနေနှင့် မျိုးဆက်သစ်တရုတ် ဒုံးကျည်များ၏ တိုက်
ခိုက်မှုခံရနိုင်သည့် အလားအလာ ပိုများလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှ
နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တဦးဖြစ်သော ပါမ္ခောအလဲန်ဒူးပွန့် (Alan Dupont)
မှ ဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်မှထုတ်သော ဒုံးကျည်သစ်များသည် ယခင်နှင့် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော
အနေအထားတရပ် ထိခြိမ်းခြောက်လာနေသောကြောင့် အမေရိကန်အနေနှင့် ထိခိုက်နိုင်သည့်
အလားအလာနည်းသော နေရာသို့ ပြန်လည်နေရာယူ အခြေချနေပြီ ဖြစ်ကာ၊ သြစတြေးလျနိုင်
ငံ၏ အလှမ်းကွာဝေးသောနေရာတွင်တည်ရှိမှုသည် ယခုအခါ မဟာဗျူဟာမြောက် အကျိုး
အမြတ်တခု ဖြစ်လာသည်ဟု ၄င်းမှဆိုသည်။
ပစိဖိတ်စစ်နယ်ဝှမ်းအတွင်း အဓိကကျသည့် အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မှာ လှံဖျား (Tip of the Spear) ဟုခေါ်တွင်သော မရိန်းတပ်ဖြစ်သည်Photo Picific Command
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် နိုင်ငံတကာ
ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု အား မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေပြီး အမြတ်ထုတ်ရန် အကြံအစည်နှင့်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တခုလုံးကို ၄င်းမှပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြောင်တောင်တောင်နှင့်
ထကြွေးကြော်သော စစ်အင်အားတိုးချဲ့လာနေသော တရုတ်၏ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်
ရန်ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကစစ်ရေး မဟာမိတ်ဖြစ်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့်လည်း
ပို၍နီးစပ်လိုသည်ဟု သြစတြေးလျကာကွယ်ရေး အရာရှိဟောင်းနှင့် ထောက်လှမ်းရေး
သုတေသီတဦးလည်းဖြစ်သူ ပါမောက္ခဒူးပွန့်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ မမှန်ကန်သော ရည်
ရွယ်ချက်များရှိသည့် ကွန်မြူနစ် တရုတ်အနေနှင့်လည်း ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး
အကြီးအကျယ် သံသယဖြစ်နေလိမ့်မည်ဟု ၄င်းမှဆိုသည်။
ယခုဆုံးဖြတ်ချက်၌ တရုတ်သည် အဓိကကျသော အချက်တခုဖြစ်သည်ဟု သမ္မတအို
ဘားမားနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဂီးလဒ်တို့အနေနှင့် ဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန် စစ်ရေး
အသုံးစရိတ်လျှော့ချနေပြီး၊ အီရတ်နှင့် အာဖဂန်ရှိ တပ်ဖြန့်ချထားမှုများအား လျှော့
ချနေခြင်းသည် ယန်းကီးများ ပြည်တော်ပြန်ကြရန်မဟုတ်ပဲ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း၌
အဓိကကျသော အနေအထားကို ရယူရန်ဖြစ်သည်ဟု အိုဘားမားအစိုးရအဖွဲ့၏ နိုင်
ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဟောင်း တဦးဖြစ်သော ဂျင်မ်စတိုင်းဘတ်ဂ် (Jim Steinberg)
သို့သော်လည်း ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် သြစတြေးလျ-တရုတ်ဆက်ဆံရေးတွင်
နက်ရှိုင်းသော နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိလာလိမ့်မည်ဟု သြစတြေးလျ
အမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးပါမောက္ခတဦးဖြစ်သူ ဟျူးခ်ျဝှိုက် (Hugh White)
အနေနှင့်ယူဆသည်။ ယခုကိစ္စသည် အလွန်သိသာထင်ရှားလှပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွက်
အလွန်ပင်စွန့်စားသော လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်နေသည်ဟု မိမိထင်၍ အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသ၌
အမေရိကန်၏ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမအဆင့်နေရာကို
တရုတ်စိန်ခေါ်လာမှုအား ဟန့်တားရေးကို ပိုမိုအားကောင်းစေရန်သာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု
ပါမောက္ခဟျူးခ်ျဝှိုက်မှ ဆိုသည်။ ယခုကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သြစတြေးလျနိုင်ငံအနေနှင့်
|အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ချဉ်ဖတ်ဖြစ်လာသော တရုတ် အားချောင်ပိတ်ထားရန်ဖြစ်သော
အမေရိကန်မဟာဗျူဟာအား လက်ခံစွဲကိုင်လိုက်ပြီဟု ဝါရှင်တန်နှင့် ဘေဂျင်းတို့မှ ရှုမြင်ကြ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် စစ်အခြေစိုက်စခန်းသစ်များ
|တည်ဆောက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပဲ အမေရိကန်မရိန်းတပ်များအနေနှင့် ဒါဝင်မြို့အနီးရှိ
ရော်ဘတ်ဆန်စစ်စခန်း (Robertson Barracks) အားအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း
အိုဘားမားနှင့် ဂီးလဒ်တို့မှ ကြေငြာလိမ့်မည်လည်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုစစ်စခန်း၌
လက်ရှိတွင် သြစတြေးလျတပ်ဖွဲ့ဝင် (၄၅၀၀) ခန့်ရှိနေပြီး နောက်ထပ် အင်အား ရာဂဏန်းမျှသာ
လက်ခံနေရာချထားနိုင်တော့သည်။ တိုးသထက်တိုးလာမည် ဖြစ်သည့် အမေရိကန်မရိန်း
တပ်များအား နေရာချထားရန် ရော်ဘတ်ဆန် စစ်စခန်းတွင်းရှိ အဆောက်အဦးများအား
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘား မား နှင့် ဂျီလတ် တို့ကို အေပက် အစည်းအဝေး တွင် တွေ့ ရစဉ်
ယခုဆုံးဖြတ်ချက်အား နှစ်အတန်ကြာ စဉ်းစားချင့်ချိန်ခဲ့ကြရသည်။ မရိန်းတပ်များအနေနှင့်
သြစတြေးလျစစ်စခန်းအား လေ့ကျင့်မှုအတွက်သာ အသုံးချမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခင် အမေရိကန်
သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဘုရ်ှအစိုးရ၏ အာရှဆိုင်ရာထိပ်တန်းအကြံပေး အရာရှိဖြစ်သော မိုက်
ဂရီးန် (Mike Green) ၏စကားအရဆိုပါက
“၄င်းတို့သည် ရဟတ်ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ လေထီးခုန်ခြင်း နှင့် ချေမှူန်းရေးလေ့ကျင့်မှုများကို
လေ့ကျင့်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကို လူနေထူထပ်သော အိုကီနာဝါကျွန်းတွင်
လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်မပြေသောကြောင့် ဖြစ်သည် ” ဟု ဆို၏။
စစ်စခန်းသစ် ဆောက်ခြင်းထက် ရှိပြီးသား သြစတြေးလျစစ်စခန်းအား အသုံးချခြင်းသည်
နိုင်ငံရေးအရ ပို၍သင့်တော်ပြီး ကြာရှည်တည်တံ့မည်ဖြစ်သည်ဟု ပင်တဂွန်စစ်ဋ္ဌာနချုပ်မှ
ယူဆသည်။ “မိမိတို့အနေနှင့် သြစတြေးလျအစိုးရအတွက် နိုင်ငံရေးအရအခက်အခဲဖြစ်စေမည့်
အရာများကိုလုပ်ဆောင်လိုခြင်းမရှိပဲ၊ မဟာမိတ်ဖြစ်တည်မှုအား မြှင့်တင်လိုသည့် ဆန္ဒသာရှိပြီး၊
အငြင်းပွားမှုကိုမလိုလား” ဟု (၂၀၁၀) နိုဝင်ဘာလအတွင်း မဲလ်ဘုန်းမြို့၌ ထိုစဉ် အမေရိကန်
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ရောဘတ်ဂိတ်စ် (Robert Gates) မှပြောကြားခဲ့၏။
သို့သော်လည်း အစစအရာရာ ချောချောမွေ့မွေ့တော့မဟုတ်ပါ။ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်း
မည်သည့် အမေရိကန်စစ်ရေး ချဲ့ထွင်မှုမဆိုအား ဂရီးန်ပါတီ (The Greens) မှဆန့်ကျင်သည်။
For : Academic Purpose >><< Key Word #Pacific Theater
ကျွန်တော် ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..ကလေးတွေကို
သူတို့အမှားလုပ်မိရင် ပြင်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခါ ထပ်ပေးတယ်..သူတို့ဖုန်းဘေလ်တွေဆောင်ဖို့ညဘက်အလုပ် ပိုလုပ်ခဲ့တယ်.. သူတို့သွားချင်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်..
ဒါပေမယ့် ဒစ်ခ်ဟို့နဲ့ ယှဉ်မိရင် ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ရှက်မိပါတယ်..
သူ့ရဲ့ မသန်စွမ်းတဲ့သားလေး ရစ်ခ်ကို ၂၆.၂မိုင် ရှိတဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ ၈၅ ကြိမ်အထိ တွန်းခဲ့တဲ့သူပါ..
ဒီလိုသူ့သားကို ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ တွန်းရုံတင်မကပါဘူး..၂.၄မိုင်ခရီးကို ရေကူးရင်းနဲ့
ရော်ဘာလှေလေးပေါ် တင်ပြီး ကြိုးနဲ့ဆွဲပါတယ်..ပြီးတော့ စက်ဘီးလက်ကိုင်မှာလုပ်ထားတဲ့ခုံပေါ်ကို တင်ပြီး
၁၁၂ မိုင်ခရီးကို နင်းပါသေးတယ်..ဒါတွေအားလုံးက တစ်နေ့တည်းမှာ လုပ်ရတာတွေပါ..
ဒစ်ဟာသူ့သားကို ဆွဲပြီး ရေခဲပြင်လျှောစီးပါတယ်.. ကျောမှာပိုးပြီး တောင်တက်ပါတယ်..
တစ်ကြိမ်တော့ သူ့သားကိုတင်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံကို စက်ဘီးနဲ့လှည့်လည်ပါတယ်..
ကိုယ့်သားကို ဘိုးလင်းချည်းပဲ ကစားခိုင်းနေလို့ကတော့ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုမျိုးဘယ်ရပါ့မလဲ.
ဒါဆို ရစ်ခ် ကရော သူ့အဖေအတွက် ဘာပြန်လုပ်ပေးခဲ့လို့လဲ..မများပါဘူး..
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၃ နှစ်က ရစ်ခ်ကိုဝင်ချက်စတာမှာမွေးတဲ့အချိန်က စခဲ့ပါတယ်..
သူ့ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာ ချက်ကြိုးနဲ့ ရစ်ပတ်နေခဲ့တာမို့ ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်မိသွားပါတယ်..
ဥာဏ်ရည်မမှီတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ခြေလက်တွေကိုလဲ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါဘူး..
သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဒုက္ခိတဘ၀နဲ့ (ကျပ်မပြည့်ပဲ) နေသွားရမှာပါ..
သူ့ကိုအဲလိုလူမျိုးတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ ဂေဟာကို ပို့ထားလိုက်ပါလို့..ဆရာဝန်ကသူ့ကိုပြောပါတယ်..
ဒါပေမယ့် သူတို့အဲလိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး.. ရစ်ခ်ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေက သူတို့ကိုလိုက်ကြည့်တတ်နေတာကို
ရစ်ခ်အသက် ၁၁နှစ်အရွယ်မှာ သူ့ကို တပ်ဖ် ယူနီဗာစတီရဲ့ အင်ဂျင်နီယာဌာနကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်..
သူပြင်ပလောကနဲ့ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ဖို့ တစ်ခုခုများလုပ်လို့ ရမလားလို့သူတို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်..
“မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. သူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး”လို့ပြောတာခံရပါတယ်..ဒီတော့ ဒစ်ခ်က
သူ့ကိုဟာသပြောကြည့်စမ်းပါ လို့ပြောလိုက်တယ်.. သူတို့ဟာသတွေပြောတော့ ကလေးက
ရယ်ပါတယ်.. သူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ အသုံးချလို့ရတာတွေရှိတာ ပေါ်လာပါတယ်..
သူ့ခေါင်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ခလုတ်တစ်ခုကို ထိခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပြူတာပေါ်က ကာဆာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့
ကိရိယာကို တပ်ဆင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ သူ လောကနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါပြီ..
သူပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားက ရေခဲပြင်ဟော်ကီ အသင်းကို အားပေးလိုက်တဲ့အသံပါ..
(အဲဒီကိရိယာကို အသုံးပြုပြီးတော့ သူကျောင်းတက်ခွင့်ရသွားပါတယ်)
နောက်ပိုင်း သူ့အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး
ကိုယ်အောက်ပိုင်းသေသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျောင်းကအဲဒီသူငယ်ချင်းအတွက် ရန်ပုံငွေရအောင်
အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်.. ရစ်ခ် ရဲ့ဆန္ဒတွေပွင့်ထွက်လာပါတယ်..
ဒစ်ခ် ကိုလည်းကြည့်ပါဦး.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် (၀က်) လို့နာမည်ပေးထားတဲ့သူ့ခမျာမှာ
တစ်ခါမှတစ်မိုင်ထက်ပိုမပြေးဖူးပါဘူး… ငါးမိုင်ခရီးကိုသူ့သားကို တွန်းနိုင်ပါ့မလား..
သူကတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်.. “နောက်တော့ မသန်စွမ်းတာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်..
နှစ်ပတ်လောက် ကိုယ်တွေအရမ်းနာနေခဲ့တယ်” လို့ဒစ်ခ် ကပြောပါတယ်..
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသန်စွမ်းသူလို့မခံစားရတော့ဘူးဖေဖေ” လို့သူစာရိုက်ခဲ့ပါတယ်..
အဲဒီစာကြောင်းလေးက ဒစ်ခ်ရဲ့ဘ၀ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်.. ရစ်ခ်ကိုအဲဒီခံစားမှုလေး
မကြာခဏပေးနိုင်ဖို့ပဲ သူအမြဲတွေးနေပါတယ်.. သူဟာလဲ ကြွက်သားတွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် ဖြစ်လာပြီး သားအဖနှစ်ယောက်ဟာ ၁၉၇၉ ခုနှစ်
ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကြီးကြပ်သူက သူတို့ကို ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ပါဘူးတဲ့..
သူတို့က တစ်ယောက်ချင်းအပြေးသမား မဟုတ်သလို.. ၀ှီးလ်ချဲနဲ့ယှဉ်ပြိုင်မယ့်
နှစ်အတန်ကြာသူတို့ပြေးနေခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲမ၀င်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး.. နောက်တော့သူတို့
ကောင်းကောင်းပြေးနိုင်ခဲ့လို့ ဘော့စတွန်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ အရည်အချင်းမီခဲ့ပါတယ်..
နောက်တော့တစ်ယောက်ကပြောတယ် “ဟေး..ဒစ်ခ်..triathlon (ရေကူး၊ စက်ဘီးစီးနှင့်
ပြေးခြင်းတို့အား မနားပဲယှဉ်ပြိုင်ရသောပြိုင်ပွဲ) ၀င်ပြိုင်ပါလား” တဲ့..
တစ်ခါမှ ရေကူးမသင်ဖူးတဲ့..စက်ဘီးလဲမစီးတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ပေါင် ၁၁၀
ရှိတဲ့သူ့သားကို ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လိုဆွဲမှာလဲ.. ဒစ်ခ်ကတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..
ခုဆိုရင် ဟာဝိုင်အီမှာကျင်းပတဲ့ ironman triathlon လေးပွဲအပါအ၀င်
သူတို့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တာ ၂၁၂ ပွဲရှိပါပြီ..
ဒစ်ခ်ကို ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားမေးတဲ့အခါ မလိုပါဘူးတဲ့..
ဒီလိုသူလုပ်ပေးတာဟာ သူတို့အတူပြေးနေစဉ် ရေးကူးနေစဉ်နဲ့ စက်ဘီးစီးနေစဉ်မှာ ရစ်ခ်ရဲ့
ရှားရှားပါးပါးအပြုံးကို မြင်တဲ့အခါမှာ ခံစားရတဲ့ပီတိကြောင့်ပါတဲ့..
အသက်၆၅နဲ့၄၃ နှစ် အသီးသီးရှိကြပြီဖြစ်တဲ့ သားအဖနှစ်ဦးဟာ
ဒီနှစ်မှာတော့ ဘော့စတွန်မာရသွန်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်သူ ၂၀၀၀၀ ကျော်ထဲက
၅၀၈၃ယောက်မြောက် နေရာကိုရခဲ့ပါတယ်.. သူတို့ဘ၀ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေပါ..
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ၂နာရီ မိနစ်လေးဆယ်မှာ ပန်းဝင်ခဲ့တယ်..ကမ္ဘာ့စံချိန်ထက်
ရစ်ခ်က “ကျွန်တော့်အဖေဟာ ရာစုနှစ်မှာ အကောင်းဆုံးဖခင်ဆိုတာ
ဒစ်ခ်အတွက်လဲ သူလုပ်ပေးခဲ့သမျှအတွက် အကျိုးတစ်ခုတော့ရပါတယ်..
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ သူ ဟာ့တ်အတက်ခ် ရပါတယ်..
ဆရာဝန်တွေစစ်ဆေးကြည့်တော့သူ့နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောတွေထဲက တစ်ခုက ၉၅% ပိတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်..
“ခင်ဗျား ဒီလိုသာ ပြင်းထန်တဲ့အားကစားတွေ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့၁၅နှစ် လောက်ကစပြီး
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒစ်ခ်နဲ့ ရစ်ခ် ကတော့ တစ်ယောက်ဘ၀ကို တစ်ယောက်
အပြန်အလှန်ကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်.. ခုဆိုရင် ရစ်ခ်က ဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်က
ဘွဲ့ရပြီး ဘော့စတွန်ကောလိပ်မှာ မသန်စွမ်းသူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသလို
ဒစ်ကလဲ လေတပ်က အငြိမ်းစားယူထားပါတယ်.. နိုင်ငံအနှံ့ ဟောပြောပွဲတွေသူတို့
တချို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ၀င်ပြိုင်ကြပါတယ်.. လာမယ့်အဖေများနေ့မှာ ရောပဲပေါ့ ..
အဲဒီနေ့မှာတော့ ရစ်ခ်က သူ့အဖေအတွက် ညစာဝယ်ကျွေးပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူ့အဖေကို
တကယ်ပေးချင်တဲ့လက်ဆောင်က သူဘယ်တော့မှ ၀ယ်လို့မရတဲ့အရာပါ.. “ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ
အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက ကျွန်တော့်အဖေကို ထိုင်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတစ်ကြိမ်လောက်တွန်းပေးချင်တာပါ” တဲ့..
သူတို့သားအဖရဲ့ လေးမိနစ်စာ မှတ်တမ်းလေးကိုလည်း ကြည့်ကြည့်ပါဦး..
ကိုတင့် (မှော်ဆရာအဖွဲ့ မှ)
Press Conference 1/2011 of Daw Aung San Suu Kyi
၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီတွင် N.L.D. ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းစာဆရာကြီးများ၏ မေးခွန်းများကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်.......
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြုစုလို့ရတဲ့ စာရင်းအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉၁ ဦး ရှိတယ်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုံးကြိုင်က အာရ်အက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
အခုထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် အထိ ကောက်ယူရရှိတဲ့ စာရင်းသာ ဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စာရင်း မဟုတ်သေးဘူးလို့ ဦးအုံးကြိုင်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာတော့ လက်ရှိ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၆၆၈ ဦး ရှိတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စာရင်း စာအုပ်ကို ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အများ သိရှိအောင် ဝေငှခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့နဲ့ မိမိ တွေ့ဆုံမှုတွေရဲ့ ရလဒ် အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်မှာ အပြောင်းအလဲတချို့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွတ်မြောက်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဘာတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာတွေ ဖြစ်မြောက်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ရှင်းလင်းတဲ့ အဲဒီပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိတဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ နောက် ကိစ္စတစ်ခု ကတော့ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စပဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အရေး စတဲ့ကိစ္စတွေ အားလုံးဟာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့အဓိက ပတ်သက်နေကြောင်းလည်း ပြောဆို ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က - “ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ ဘာပေါ်မှာ မူတည်လဲ ဆိုတော့ လွတ်လပ်တဲ့ တရားရေး မဏ္ဍိုင် ရှိရပါမယ်။ တရားရေး မဏ္ဍိုင်ဟာ လွတ်လပ်ရမယ်။ သန့်ရှင်းရမယ်။ ဒီလို သန့်ရှင်းပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့ တရားရေး မဏ္ဍိုင် မရှိလို့ကတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စလို့ ကျွန်မ မြင်ပါတယ်။ ဒီဟာဟာ ဒီမိုကရေစီ အတွက် မရှိမဖြစ် ရှိရမဲ့ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဟာ အတွက် ကျွန်မတို့ ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားသွားပါ့မယ် ဆိုတာလည်း ပြောချင်ပါတယ်” ဒီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ပြည်တွင်း အခြေစိုက် ပြည်ပ သတင်း မီဒီယာ သတင်းထောက်တွေ၊ နိုင်ငံခြား သံရုံးတွေက ပြန်ကြားရေး အရာရှိတွေ၊ ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာန ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုစုပေါင်း သုံးရာခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးတင်ဦး ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း အစရှိတဲ့ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် အားလုံး အပြင် အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တက်ရောက်ပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို မွန်းလွဲပိုင်း သုံးနာရီကျော်မှာ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ http://www.rfa.org/burmese/news/assk-one-year-press-11142011094845.html
Hi , I'm Tway Yaw.. Please takeamoment to read and if you would like to donate please call this number 647-718-1250.. .
Background History of Yaung Ni Oo High School
Following the Burmese military’s brutal crackdown on the participants of 1988’s popular democracy uprising, and the seizure of state power throughamilitary coup on September 18, thousands of students left their homeland for the border areas in order to continue the struggle for democracy and human rights in Burma. Most of them were still studying when they started their journey. Soon after the students arrived at Burma-Thailand border they found that successive Burmese military governments had neglected people in there areas and denied them education, health care and social welfare.
During the 50 years-long civil war in Burma, because of the inhumane and miserable performance of the military regime (now SPDC),agreat deal of villages were destroyed and many were forced to relocate especially in the rural area of Burma, so they have been in trouble up to present time. As the lives of the parents are not stable, there is no guarantee for their children’s education. Although some revolutionary organizations have opened the schools in some areas, there are not enough. Living in scattered areas and in poverty because of the civil war, the young children who are mostly called “the future of the country” have no future, no hope and no chance for their life.
The All Burma students’ Democratic Front (ABSDF) was fully aware of the need for the education of the young generation in these areas. Therefore the desire to fill the gap in children’s education has always been in the mind of ABSD members.
In 1989 their dream began to take shape and they establishedaprimary school in Salween camp. However the camp came under Burmese military attack and the school was moved toanew location. In 1995 the school grew fromaprimary school to includeamiddle school. Further Burmese military offensives forced further movementanew place on the border. In 1999 the school was further extended to includeahigh school section. The school gained stability and has been able to grow dramatically. The location of the school has been moved several times, due to the Burmese military offensives along the border and changes in the Thai government policy. The school is currently situated in Mae Lar Oon refugee camp which is situated 40 kilometers toward the Thai-Burma border from the Mae Sariang township on the Thai soil. The school is the compound of the ABSDF families’ camp amoung the Mae Lar Oon refugee camp, so called section 13 of Mae Lar Oon camp. During the 2010-2011 school year, the school hosted about 430 school children with the strength of 24 teachers.
Current Situation and Financial Statement
The Yaung Ni Oo School has been runningaschool since 2003-2004 academic year at Mae La Oon refugee camp for children of its own member, local children in the area, and the children of displaced persons who do not have access to school. The school has been moved several times, due to the Burmese military offensives along the border and changes the Thai government policy.
In the financial problem, last two years the school received partially financial assistance from MTCE, some NGOs and some individual donors. The school had some amount of the Budget for the whole year. During the 2010-2011 school year, MTCE said about that they didn’t continue their assistances. Therefore the school faced withahuge financial problem. The school received its stationary from the NHEC. NHEC supported only the school materials to school without giving any money for other needs. In 2011-2012 school year, NHEC also stopped their supply. Beyond the funding changelings the school is continue to faces difficulty in finding another financial assistances.
In conclude, according to the financial situation, 2011-2012 school years is still critical. The future of the school is under threat yet again. Those unfortunate, the children need more help to keep Yaung Ni Oo open.
Emergency Need Your Help
During the last two months, the school run out their money and borrowed some money from others to continue to continue school opening. So if we will not receive any financial assistance from no one and nowhere, the school must be closed. So Please help us for the school to continue to reopen. The school expense (45000 baht(1500$) for managing the boding students and teachers salary and office management. Therefore, we need emergency need for the school. Please help those of the students from our school as much as you can.
P.O. Box 31, Mae Sariang,
Mae Hong Son 58110, Thailand
Tel: +66 53 621 186, +66 (0)81 724 1615
Fax: +66 53 681 067
Email: Juliunoo@ gmail.com
မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်း ဖိလစ်ပိုင်ကို ၅-၀ ဂိုးဖြ...